सोमबारसम्म समय थपियो करोडौंको साधारण शेयर ! – Arthatantra.com
दश रुपियाँ प्रतिकित्तामा दश करोड बीस लाख कित्ता सेयर आजैदेखि बजारमा काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेड कोष प्रबर्धक र सानिमा क्यापिटल लिमिटेड योजनामा व्यवस्थापक […]
हाथवे इन्भेष्टमेन्ट आफ्नै कम्प्लेक्समा काठमाडौं । आइएमई समुहद्वारा प्रवद्र्धित हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड काठमाडौं […]
लगानीकर्ताहरुले २ वटाको ६०% नगद लाभांश पाउँदै हुनुहुन्छ,बुक क्लोजको मिति ख्याल गर्ने कि ! काठमाडौ । नबिल ब्यालेन्स्ड फन्ड–१ ले ४२ प्रतिशत र एनआइबीएल क्यापिटलले एनआइबीएल समृद्धि […]
बजार परिसूचक ह्वात्तै घटेर नेप्से १५ सय अंकभन्दा तल झरेपनि कमाउनेमा को–को परे ? काठमाडौ । आइतबार सेयर बजार २६.३५ अंकले घटेर १४९६.४६ अंकमा झरेको छ । यसदिन व्यापारिकबाहेक […]